Breaking : सोच्नै नसकिने गरि घट्यो आलुको मुल्य ! – Life Nepali
Breaking : सोच्नै नसकिने गरि घट्यो आलुको मुल्य !
Breaking : सोच्नै नसकिने गरि घट्यो आलुको मुल्य ! आलुको ब्यबसायी खेती हुदा उत्पादनमा बृद्धि हुनु र नयाँ आलु बजारमा आएसँगै मुल्य घटेक हो । हुम्लामा आलुको मुल्य सस्तिएको छ । सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ अम्मरसिंह भण्डारीले हाल आलुको मुल्य प्रतिकेजी पैतीस रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको बताए। ब्यबसायीक रुपमा आलु खेती गर्दै आउनु भएका भण्डारीले नयाँ आलु बजारमा नआउदासम्म प्रतिकेजी सत्तरी रुपियाँ पर्ने भएपनि नयाँ आएसंगै आधा मुल्य घटेको बताए । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous दशैंमा घर जाँदै हुनु हुन्छ ? एकपटक पढ्नुहोस्, सरकारले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना !
Next असोज १५ गतेसम्मका लागि सबै बन्द गर्ने निर्णय, भर्खरे आयो यस्तो खबर !